एशिया कप छनौटअन्तर्गत ताजकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली टोलीमा को–को छन् ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > एशिया कप छनौटअन्तर्गत ताजकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली टोलीमा को–को छन् ?
एशिया कप छनौटअन्तर्गत ताजकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली टोलीमा को–को छन् ?
काठमाडौ । एशिया कप छनौटअन्तर्गत आगामी मंगलबार ताजकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक ग्योटुकी कोजीले ताजकिस्तानसँगको खेलका लागि २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो ।
गोलकिपरमा किरण चेमजोङ, विशाल श्रेष्ठ र विकेश कुथु छन् । डिफेन्डरमा विराज महर्जन, देवेन्द्र तामाङ, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, जितेन्द्र कार्की, आदित्य चौधरी र कमल श्रेष्ठ छनौट भएका छन् । मिडफिल्डरमा सुनील बल, हेमन गुरुङ, रोहित चन्द, सुमन लामा, अन्जन विष्ट, विक्रम लामा, विशाल राई, हेमन्त थापा मगर र सुजल श्रेष्ठ छानिएका छन् ।
फरवार्डमा विमल घर्तिमगर, जर्ज प्रिन्स कार्की, नवयुग श्रेष्ठ र भरत खवास छन् । यमनसँगको खेलमा टोलीमा परेका फरवार्ड अनिल गुरुङ यसपटक टोलीमा परेका छैनन् । उनको स्थानमा जर्ज प्रिन्स कार्कीलाई राखिएको छ । छनौटको समूह एफमा रहेको नेपालले आउँदो मंगलबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटो काठमाडौंमा ताजकिस्तानसँग खेल्ने छ ।
फिलिपिन्ससँगको खेलमा मनिलामा पराजित भएको नेपालले यमनलाई ३ महिनाअघि भने हल्चोकमा बराबरीमा रोकेको थियो । मंगलबारको खेलपछि नेपालले फिलिन्सिसँग होम तथा यमन र ताजकिस्तानसँगको अवे खेल खेल्न बाँकी रहने छ । यो समूहको शीर्ष दुई स्थानमा परेमा नेपाल सन् २०१९ मा हुने एशिया कपमा छनौट हुने छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ भदौ १८
२०७४ भदौ १८ गते १२:४१ मा प्रकाशित
६ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का,कारण परमाणु परीक्षण ?
सुनको भाउ बढेर ५७ हजार नजिक पुग्यो,किन बढ्दैछ भाउ ?
स्वावलम्बनले पठायो १४% नगद लाभांश सेयरधनीको बैंक खातामा
जलविद्युतमा सम्झौता भइसकेको ऋण दिन बैंकको आनाकानी, किन ?